Teknolojia ho an'ny fahombiazan'ny varotra mahomby. Martech Zone
Teknolojia ho an'ny fanamafisana ny varotra mahomby
Alatsinainy Aprily 15, 2013 Wednesday, May 21, 2014 Jenn Lisak Golding
Amin'izao tontolo ankehitriny izao, ny teknolojia sy ny fahazoana mivarotra dia mifanindran-dalana. Ilaina ny manara-maso ny hetsika ataon'ny mpitrandrahanao mba hahamendrika azy ireo ho fitarihana mafana na malefaka. Ahoana ny fifandraisan'ny prospect amin'ny marikao? Mifandray amin'ny marikao ve izy ireo? Inona no fitaovana ampiasainao hanarahana an'io?
Niara-niasa taminay izahay mpanohana ny tolo-barotra, TinderBox, hamoronana infografika momba ireo fitaovana sy fizotra samihafa ampiasain'ny orinasa hahafeno fepetra sy hanarahana fitarihana. Na dia miova aza ny fantsom-pivarotana dia mbola misy dingana sasany miavaka mandritra ny tsingerin'ny varotra: Marketing & Sales, Prospecting, Qualifying, Confirming, Negotiating, and Transacting. Mety tsy ho linear ny fizotrany, fa ireo dingana ireo dia zava-dehibe amin'ny famaranana ny varotra.
Iza amin'ireo fitaovana ireo no ampiasainao hampihenana ny tsingerin'ny varotrao? Ahoana no fomba ahafahanao mamorona fotoana mety ho an'ny ekipanao manoloana ny fahazoana mivarotra? Ny fampiasana fitaovana mety dia hanampy anao amin'ny "volamena varotra."
Infografika sy horonan-tsary: ​​fanadihadiana amin'ny fitondran-tena amin'ny fikarohana an-tserasera
Freebase: Database an'ny olona, ​​toerana na zavatra
Apr 17, 2013 amin'ny 6: 54 AM
“Iza amin'ireo fitaovana ireo no ampiasainao hampihena ny varotrao? Ahoana no fomba ahafahanao mamorona fotoana mety ho an'ny ekipanao manoloana ny fahazoana mivarotra? Ny fampiasana fitaovana mety dia hanampy anao amin'ny "volamena varotra."
Tsy afaka nifanaraka taminao intsony aho. Ny fampiasana ireo fitaovana mety - ary tsy maintsy holazaiko amin'ny fampiasana azy ireo amin'ny fomba mahomby - dia afaka mitsitsy fotoana be dia be ary hahomby kokoa amin'ny asanao. Na izany aza, ny olana amin'ity dia ny olona maro no tsy afaka mampiasa ireo fitaovana ireo na mampiasa azy ireo tsy mandaitra.
Apr 17, 2013 ao amin'ny 3: PM PM
Misaotra tamin'ny hevitrao, Anne! Miombon-kevitra aminao koa aho. Heveriko fa olana ankehitriny ny fampiasana fitaovana amin'ny fomba mahomby - variana ny olona na tsy mandany fotoana hianarana. Noho izany, mety ho very fotoana maro samihafa ianao.
Apr 18, 2013 amin'ny 2: 09 AM
ya jenn mampiasa fitaovana mahomby dia raharaha lehibe ankehitriny, fanazavana tsara tanq
Apr 18, 2013 amin'ny 3: 09 AM
Tiako ny fomba DK New Media dia mpiara-miasa amin'i Tinderbox ary ny infographic dia manome soso-kevitra ny Tinderbox 300% mihoatra ny fitaovana hafa eto. Manontany tena aho hoe firy ny fitaovana hafa eto izay mifandray DK New Media ary Tinderbox. Be loatra ve ny manantena fomba fijery feno momba ny rindrambaiko marketing / varotra azontsika?
Sep 22, 2014 amin'ny 11: 16 AM
Tiako ilay infografika, Jenn. Vita tsara - farafaharatsiny araka ny fijerin'ny olona iray izay samy teo amin'ny toeran'ny fitakiana. Manaiky ireo fanehoan-kevitra etsy ambony aho - koa ny olona dia miala amin'ny dingana fananganana ireo fitaovana ireo.
Sep 22, 2014 amin'ny 11: 22 AM
Misaotra, Brian! Mankasitraka ny eritreritrao aho. Heveriko fa be dia be ny fitaovana any, ka sarotra ny mahafantatra hoe inona no tadiavinao na inona no tena tokony hampiasana azy ireo. Izany dia ho zavatra manan-danja eritreretina amin'ny fomba fijerin'ny marika, izay mila ahafahan'ny orinasa manazava tsara izay azon'izy ireo / tokony hampiasaina. Ary, amin'ny lafiny ilany an'io vola io, ny mpampiasa dia mila mahafantatra izay tadiaviny ihany koa mba tsy hampiasa vola amin'ny zavatra izay tsy hanohana ny tanjon'izy ireo voalohany.